बेपत्ता आयोगको नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बेपत्ता आयोगको नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन
शनिबार, माघ २९, २०७३ १०:३९ मा प्रकाशित !
२९ माघ, काठमाडौँ । संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको दुई वर्षको कार्यकाल सकिँदासमेत आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियासमेत पूरा नभएको भन्दै समितिले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले आयोग गठन ऐन संशोधन र बेपत्ता तथा यातनासम्बन्धी कानुन आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदासम्म दिन सकेको छैन । समितिले मौजुदा ऐन संशोधन र दुई नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको यो तेस्रोपटक हो । आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल बिहीबार सकिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दुवै आयोगको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेको हो ।
समितिले आउँदो बैठकमा आवश्यक कानुन निर्माण र काम कारबाहीका विषयमा सरकार र आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यसम्पादन तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण तथा संशोधनका लागि प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्न र ती आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।
कार्यकाल सकिए पनि आयोगले बेपत्ता र यातनालाई कसुर घोषित गर्ने कानुनसमेत पाउन सकेनन । प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार यातना र बेपत्ता कसुर होइनन । दुवै कानुन नपाएसम्म आयोगले बेपत्ता र यातनामा पीडकलाई कस्तो सजाय हुने भन्ने किटानीसाथ कारबाही सिफारिस गर्न सक्दैनन ।
बेपत्ता आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदामा कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनादेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरी मस्यौदा तयार पारेको थियो । मस्यौदा शान्ति मन्त्रालय मार्फत आयोगले पठाएको एक वर्ष हुन लागेको छ तर सरकारले अहिलेसम्म संसद्मा पेशसमेत गरेको छैन ।
बेपत्ताजस्तै यातनासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै थन्किएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०७१ कात्तिकमा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो । लामो समय त्यत्तिकै थन्किएको विधेयक सरकारले केही महिनाअघि संसद्मा पेश गरेको थियो तर संशोधन दर्ता भइसकेपछि उक्त विधेयकको काम अगाडि बढेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका आधारमा टेकेर आयोगले काम अगाडि बढाउन सक्ने आधार भए पनि पर्याप्त भने छैन तर बेपत्ताको हकमा आयोगलाई कारबाही सिफारिसको कुनै आधार नै छैन । आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि कानुनी आधार बिना आयोगले अनुसन्धान सके पनि कसुर अनुसार कारबाहीका लागि लेख्ने आधार छैन । समितिको शुक्रबारको बैठकले आयोगका काम कारबाहीमा सहायताका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने भएको छ ।
यस्तै सोही बैठकमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री, कानुनमन्त्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
हाल दुवै आयोगमा गरी द्वन्द्वकालीन घटनाका ६० हजारभन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि दुई हजार ८७४ उजुरी विचाराधीन छन भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी छन । सत्य निरुपणमा हत्या, बलात्कार, यातनाजस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरी छन ।
PREVIOUS POST Previous post: संसदको बैठक अघि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा
NEXT POST Next post: सम्पदा पुनर्निर्माण ठेक्कामा दिने नीतिको विरोध
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शनिबार, माघ २९, २०७३ १०:३९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शनिबार, माघ २९, २०७३ १०:३९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शनिबार, माघ २९, २०७३ १०:३९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शनिबार, माघ २९, २०७३ १०:३९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शनिबार, माघ २९, २०७३ १०:३९